Yaadannoo FDG 2016 fi Tinnisa Diinagdee Sochii QBO’f taasifame! « QEERROO
Yaadannoo FDG 2016 fi Tinnisa Diinagdee Sochii QBO’f taasifame!
November 18, 2016 By Qeerroo in Oduu/News	Leave a comment
Oslo, Sadaasa 12, 2016
Yaadannoon Fincila Diddaa Garbummaa waggaa 11ffaa sababa gochuun qophii kutaa ABO Scandinavia fi Konyaa ABO Oslo waliin ta’uun qopheessan, Sadaasa 12, 2016 bakka MSG-ABO; J/Dr.Shigux Galataa fi J/Jirenya Guddata, Qondaalonni, miseensonni fi deegartoonnii Qabsoo Bilisummaa Oromoo (QBO) argamanitti sirna ho’aan magaala Oslo itti kabajamee oole.
Sagantaan guyyaa yaadannoo Wareegamatootaan eegaluun Faaruun Alabaa Oromoo faarfatamee jira. Yaadannoo Guyyaa FDG ilaalchisee J/Dr. Dhugaasaa Namee barreessaan Kutaa ABO Scandinavia ibsa gabaabaa kennee jira.
Zoonii kibbaa irraa Miseensi WBO kan ta’e J/Amaan Filee karaa bilbilaa sududaan haala qabsoo Bilisummaa Oromoo fi WBO yeeroo amma sadarkaa maal irra akka jiru ibsa bal’aa kennee jira. Itti fufuun Miseensota fi Deegartoota ABO, waan qabanii fi waan danda’aniin ABO fi WBO bira dhaabataa jiran galateefatee jira. Haata’u malee yeroo amma baay’inaa WBO fi leenjii kennamaa jiruu fi qabsoo keenya caalaa furgaasuuf yeroo kam caalaa deegarsi QBO’f barbaachisaa akka ta’ee ibsee jira. Kanaaf Oromoon biyya Alaa keessa jiru dirqama Oromummaa fi boru kan seenaan isa gaaftu tinnisa diinagdee deegarsa WBO’f oolu dachaan akka gumaachani yaadachiisa dhaamee jira.
Itti fufuun Miseensa hoggana Qeerro Bilisummaa kan ta’e Dargaggoo Seenaa Dhugaa; duubee seensa Sadaasa 9 fi maaliif akka guyyaan kun golee Oromiyaa hunda keessattii fi Biyya alaa bakka caasaan Adda Bilisummaa Oromo jirutti yaadatamaa jiru ibsee jira. Dargaggoo Seenaan; adeemsa ijaarsa Qeerroo, injifannooo argaman, fuul-dureen QBO maal fakachuuf akka deemuu bali’naan ibse jira. Akkasumsa ijaarsi Qeerron kan waggaa tokko dura as ba’e osoo hin taanee adeeemsa bar-kurnee tokko olii keessa muuxanoo QBO keessatti horatamee irraati hundaa bifa ijaarsaan kan of beeksisee jalqaba bara 2011 akka ta’e ibsaa fi hubii gaarii hirmaattotaaf kenne jira. Itti fufuun Oromoota biyya ambaa keessa jiraataa Dhiiga ilamaan Oromoon qabsoo sadarkaa hara’a irra jiru irran ga’ame gar-dabarsuuf aggammii taasifamaa jiru irra akka of qusatan akeekkachisee jira. Yeroo amma fuulleffanaa keenya Garbumma xumura itti gochuuf jaarmiyaa siyaasa Oromoo fi ijaarsoleen qaama hawaasa hundi waltumsuun qabsoo finiinaa jiru deegaruu akka ta’e waamicha dabarsiiee jira. Gaaffi mana keessa ka’eef deebii bal’aa kenne jira.
Keesummaan Guyyaa Dr. Shigux Galataa MGS-ABO fi gaafatamaan Birkii Dipilomaas biyya Alaa qaamaan argamuun; sochii fi adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO hogganamu sadaasa 12, 2015 irraa kaasee jiru iirratti xiyyefachuun: Injifannoolee argaman, Sochii ABO taasisaa jiru: ijaarsa jaarmiyaa fi siyaasaa, Diplimaasii, hariiraoo jarmiyoolee Oromoo fi kan saboota Cungurfamuu waliin taasisaa jiru, danqaalee/challange Qabsoo keenya gama hundaan jiru fi Oromoon maal gochuu akka qabu irratti ibsa bal’aa keennee jira. Gaafii fi yaadi adda addaa hirmaatotta irra dhiyaatee deebiif quubsaa fi wali hubannaa gaarii taasifamee jira.
Akeekin Yaadannoo FDG kaayyoo ilmaan Oromoo; muratoo, qaroo fi ol guddatoon keenya irratti waregaman bakkan ga’uuf guyyaa itti erbuu keeny haarofannuu fi guyyaa itt gahee nurra eegamu baanu dha. Konyaalee ABO; Oslo, Kaaba Norway, Stavanger, Trøndlag fi Ayyaantuu Dagaa akkasumas Sabbontoota Dubartoota Oromoo magaala Oslo fi nannoo keessa jirataniin qophii tinnisna diinagdee Sochii WBO jabeessuu fi Qeeroo Biyyoleessa Oromoof taasifamee milkeessu irratti qooda olaanaa kennanii jiru. Waluma galatti deggersa WBOf oolu sassaabuuf sagantaa gumaataa godhamee irraa maallaqa biyya Norway 115,000 kr argamee jira.
Galgala Aadaa irratti Artisitoonni keenya kanneen akka Hirphaa Gaanfuree, Tottobaa Taaddesaa fi Daanga Hayileyesus Sirboota Warraaqsaan hirmaattota bohaarsanii jiru.
Sochiin FXG daran jabaatee itti fufa!
Konyaa ABO Oslo fi Kutaa ABO Scandinavia!
« SBO: Sadaasa 18 bara 2016. Oduu, Sirna Yaadannoo FDG Waggaa 11ffaa Hawaasa Oromoo Afrikaa-Kibbaatin gaggeeffame irratti gabaasa qindaa’e fi Gaaffii fi deebii Dr. Gadaa Oljirraa waliin taasifame Kutaa 3ffaa.
Yaadannoon Waggaa 11ffa FDG/FXG gaafa Sadaasaa 12, 2016 Minnesotatti kabajame »
OMN FINFINNEE: QEERROO SHOW (Adol 18, 2018) Turtii hidhamtoota Siyaasaa duraanii Injinar Masfin Abbabaa fi obbo Masfin Ittaana waliin.